Archive du 08-avril-2022
Vahoakan’Iarivo leo jadona Manome 48 ora hanesorana ny ben’ny tanàna
Mafampana indray ny toe-draharaha sosialy sy politika eto Antananarivo, ary ahiana hangotraka ny faran’ny herinandro.
ALLEMAGNE HIVIDY “BOUCLIER ANTI-MISSILE” AMIN’I ISRAEL
Nahazo fankatoavana avy amin’i Israel sy Etazonia ny fividianan’I Allemagne, fitaovam-piadiana fiarovana amin’ny tifitra balafomanga na “Bouclier anti-missile”.
Fahafatesana mampiahiahy Hofongarina indray ny razan’ilay zazavavy kely
Voatery tsy maintsy ho fongarina indray ny nofo mangatsiakan’ilay zazavavy kely vao 05 taona monja maty tamin'ny fomba mampiahiahy tamin'ny 25 martsa lasa teo tany amin’ny distrikan’i Sambava.
Politika sy raharaham-pirenena Inona marina no tena ketriky ny HVM ?
Herintaona sy tapany mialohan’ny fifidianana isika izao, ary samy miomankomana sy manomana ny paikady politikany ireo vovonana sy antoko politika samihafa.
Fampidinana ny vidin’entana Tena tsy afa-manao don-tandroka ve ny Fanjakana ?
Tena henjana ny fifehezana ny vidim-piainana, ary io lasa adihevitra io ny mikasika ny fameran’ny Fanjakana ny vidin’entana farany ambony azo ampiharina.
Fiitantanana mivaralila Mpiasam-panjakana ambony maro no efa tena leo
Misy amin’ireo tompon’andraikitra ambony sasany toa ny tale na “chef de service” eny anivon’ny ministera eny no tena sahiran-tsaina amin’izao fotoana
Tsakitsaky amoron-dalana 300 Ar ny mofo gasy, misy 1000 Ar ny kafe
Mbola tena mitana anjara toerana lehibe ho an’ny tokantrano Malagasy izany fihinanana kafe sy mofo izany.
Hotel Carlton Anosy Hanomboka rahampitso ny Salon du Chocolat
Hotanterahina rahampitso sabotsy 09 aprily etsy amin’ny Hotel Carlton Anosy ilay Salon du chocolat et de la gourmandise andiany fahaefatra, karakarain’ny fikambanam-behivavy mpanao asa soa Wdnesday Morning Group.
Mpandraharaha voatafika tao Mahitsy Jiolahy roa matin’ny zandary, nanjavona ny ampaham-bola
Jiolahy roa nanafika mpandraharaha handeha hamonjy banky no lavon'ny zandary omaly 07 aprily 2022 tokony tamin'ny 08 ora maraina tany Mahitsy.
Hotely eto an-drenivohitra Ampiasaina ny teknolojia amin’ny famandrihana toerana
Tsy mitsaha-mivoatra ny teknolojia. Amin’ny alalan’ny finday monja dia efa hahavitana zavatra maro toy ilay "application version beta"vaovao vao novokarin'ny kaominina Antananarivo renivohitra.
Manjakaray Tratra ireo tena atidohan’ny mpanendaka
Tovolahy roa voalaza fa tena ati-doha amin’ny asa fanendahana eny amin’iny faritra Manjakaray iny no nosamborin’ny Polisy miasa ao Analamahitsy ny 06 aprily lasa teo.
Antananarivo Renivohitra Tafiakatra avo 4 heny fahalotoan’ny rivotra
Natokana hankalazana ny andro maneran-tany ho an’ny fahasalamana ny omaly 07 aprily 2022. Noho ny tontolo iainana izay mifamatotra mandrakariva amin’ny fahasalamana,
Cacao Malagasy Tanjona ny hanondrana 25 000 taonina hatramin’ny 2025
Isan’ireo vokatra mampiavaka an’i Madagasikara ny cacao, ary tsara kalitao ny vokatra Malagasy amin’io sehatra iray io.
Kaominina Antananarivo renivohitra Mizaha fahasalamana maimaimpoana eny Avaradoha
Olona maherin'ny 1000 no kendrena hisitraka ny tolotra ara-pahasalamana manakaiky vahoaka izay karakarain'ny kaominina Antanananarivo renivohitra nanomboka omaly eny amin’ny fokontany Avaradoha,
Kaominin’i Talatamaty Entanina ho lasa siantifika ireo tovovavy mpianatra
Ny 30%-n’ny tovovavy eto amintsika no nisafidy ny taranja siantifika tamin’ny taona 2020 raha araka ny fantatra.
Varotra hani-masaka Omena fiofanana ireo mpivarotra ao Antehiroka
Tena hiankinan’ny fahasalamana ny sakafo hanina. Anisan’ireny ny sakafo hamidy eny amoron-dalana izay handraisana fepetra manokana manomboka izao ho an’ny kaominina Ambohibao Antehiroka,
Kaominina Ambatondrazaka Ny ben’ny tanàna naato, karama tsy misy
Mandalo fotoan-tsarotra ny fitantanana sy ny fiadidiana ny kaominina Ambatondrazaka Renivohitra. Misavovona ny olana, ary misy fiantraikany amin’ny raharaham-panjakana.